Wiilo Soomaaliyey dib ugu guurtay si ay hooyadeed u daryeesho - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wilo Abdulle tillsammans med sin mamma utanför huset i Somalia. Foto: privat
Wiilo Soomaaliyey dib ugu guurtay si ay hooyadeed u daryeesho
La daabacay måndag 23 november 2015 kl 12.01
Dadka xigtadooda dhow dalka dibaddiisa ku daryeela ayaa Sweden ah koox soo badanaysa balse aan muuqan. Wilo Abdulle nolasheeda Göbeorg ayey u daryeesho hooyadeed oo Soomaaliya joogta.
Radio Sweden iyo sisuradio waxay aruurinayaan qisooyinka qaraabada ku qasbanaada in ay xigtadooda ku daryeelaan dalka dibaddiisa. Qisooyinkas waxaa lagu aruurinayaa ciiwaanka hashtag ee ah #familjutomlands halkan ka aqriso
Ku dhawaad muddo 25 sanno ah ayey Wiilo ku nooleyd Sweden, waxbarasho ayey halka ka sameysatay, kana shaqeyneysay. Hooyadeed oo waayeel ah ayaa Soomaaliya ku nool, Wiilo in ay dib ugu noqoto waddankii si ay hooyadeed u daryeesho. "Hooyadey maanta wey ii baahan tahay in la jooga" ayey tiri.
Wiilo Abdulle ilmaha hooyadeed dhashay iyadaa ugu yar, dhamaan wallaalaheed dibadda ayey ku sugan yahiin reero iyo caruur ku heystaa. "maadaama aan annigu carur laheyn ayaan go'aankas gaaray oo iri adinka ilmahiina kama tagi kartiin annigaa baxaya oo hooyo heynaya", ayey tiri.
Sida laga dheehan karo warbaxin hey'adda bulshada horey u sameysay muddo hadda laga joogo dhowr sanno, waxaan Sweden ku nool 1,3 milyan oo ruux oo si joogto ah u daryeela ama u taageera xigto dhow (qaraabo). Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn dadyowgan intooda ehladooda dalka dibaddiisa ku daryeesha.
Wilo Abdulles hooyadeed waa 80 sanno jir, weligeedna gacan qabad u baahan, sida ay tiri Wiilo. Lakiin hadda hooyadeed waa daqowdey, waxayna u baahantahay caawinaad iyo daryeel joogto ah. Muddo labo sanno hadda laga joogo ayey Willo go'aansatahay in ay iskaga tagto nolasheedii Göteborg dibna ugu guurto Soomaaliya si ay u daryeesho hooyadeed.
Sweden ruuxa qof qaraabadiisa ah daryeela waxaa la siiyaa taageero dhaqaale oo uu qofka ka dalban karo hey'adda caymiska bulshada Försäkringskassan, iyadoo uu xataa qof ka heli karo caawinaad degamda uu ku nool yahay. Laakiin sharuucdan waxay quseysaa keliya ruuxa Sweden kul nool oo qaraabadiisa halkan ku daryeela. Haddii aad tusaale u baahatid hooyadaa oo ku nool dal kale in aad dareyeeshid waxaa keliya ee aad xaq u leedahay in aad heshid fasax aad ku soo booqatid, iyadoo weliba aadan wax muhaar ah aadan heleynin inta aad maqan tahay. Qof eheladiisa dalka dibaddiisa ku caawiyo oo ku daryeela waxaa la soo gudboonaata caqabado ka duwan kan dalka gudahiis qaraabadiisa soke ku daryeela. Sidas waxaa yeri Ann-Britt Sand oo cilmibaare ka ah jaamacadda Stockholm.
- Waxa dhaci karta in ay deriska iyo dadka ay yaqaaniin ka baryaan in isha ugu hayaan qof eheladooda caawin u baahan. Haddba waddanka ay tahay bay ku xiran tahay. Waddamada waqooyiga Yurub waxaa ka jra nidaam waayeelka lagu daryeelo oo qof caawin ka helo karo. Laakiin waddamo badan nidaamka kamo jiro, taas oo keenta in qaraabado lacag siiyo qof caawiyo ruuxa waayeelka ee laga soo tagay. Waxayna noqon kartaa culeys weyn oo dhaqaale, ayey tiri.
Inta aysan Wiilo dib ugu guurin Soomaaliya Waxay isku deyday in Sweden keensato hooyadeed laakiin ma u suuroobin. In ay horey iyo gadaal Sweden iyo Soomaaiyana iskaga noqnoqotana ma ula muuqan xal waari kara Wilo Abdulle flyttade tillbaka till
Wiilo hooyadeed marar badan waxay ka calool xumaataa gabadheeda in ay iyada darteed nolasheeda Sweden uga soo tagtay si ay iyada u daryeeshi. Waana ku dhib hooyo in ay aqbasho iyada darteed in camal la'aan u joogo Soomaaliya, ayey tiri Wiilo.